Dib u eegistii 12:00, 3 Jannaayo 2019 ee Mystic212 (Wadahadal | ku darsasho)
Kani waa maqaal ku saabsan Meere. meeraha, eeg Docey.
Muuqaalka meeraha Docey
Docay ( Amxaari: ነፕቲዩን) waa meereha sideedaad (8) ee tirada meereyaasha Bahda Midaysay Qoraxdu iyo midka oogu fog inta uu u jiro qoraxda. Sidoo kale, Docay waa meeraha afaraad (4) ee ugu xajmiga weyn iyo midka sadexaad (3) ee ugu muga badan culeeyska meereyaasha.
Docay ( summad : ♆ ) waa meere siddeedaad ee Baho cadceedeed. Neptune waxaa loo yaqaan Rafaa ama Docay, gaaska , iyo waxa la magacaabay ka dib ilaah badda Neptune oo ku sugantahay Roman . On 24 August 2006 , markii sumalka Caalamiga ah ee Midowga go'aansaday in halkay ka dib dambe u ahaa meeraha ah , Neptune noqday meeraha ugu fogaa ee nidaamka qoraxda . Neptune ahaa meeraha ugu fogaa ee nidaamka qoraxda ayaa sidoo kale inta u dhaxaysa 1979 iyo 1999 , tan iyo markii halkay ka ahayd dhaw oo qorraxda ka sii Neptune . Neptune aad uula mid Triton , labada kooban atmosfeerta iyo kiimikada - labada badanaa of hydrogen , helium iyo methane ka kooban . Neptune [ 9 ] uu qaato in ka yar kala badh iftiinka qoraxda sida ugu badan ee Triton , laakiin kulaylka ka qayib ay gudaha dhigaysa Neptune hiinfaadhid badan Triton . Inkastoo Neptune waa meelo ka fog oo qorraxda ka sii Triton ma , waxa ay leedahay jawi badan livelier . Waxay leedahay dabaylo in gaari karto in ka badan 2 000 km saacadiiba , taas oo ah xawaaraha dabaysha ugu sareeya ee nidaamka qoraxda . Muujinta The ugu caansan ee Neptune leeyihiin lahaa kaalinta weyn ee mugdiga ah . Waxa lahaa ballaciisu yahay ee ku saabsan 16 000 kiilomitir iyo waxa ay hadda baxeen [ 10 ] , iyo aad uula mid ahayd Jupiter ee Great Red Spot . Triton waxaa la janjeerin 28 digrii , ku dhawaad ​​ugu badan ee Dhulka . [ 11 ] Masaafada u dhaxaysa Earth iyo Neptune wuxuu ku saabsan yahay 4.4 bilyan oo km oo wadin 110 km / h , waxaa ay qaadan lahayd oo ku saabsan 4500 sano . Xataa xuku ku qaadan lahayd muddo aad u dheer , tusaale ahaan marka aad tegi lahaa 11 kilomitir labaad , waxaa ay qaadan lahayd oo ku saabsan 12-13 sano . Tusmada [ hide] 1 Neptune - bixitaanka 2 Orbit 3 Properties Jirka 3.1 Qaab dhismeedka Inner 3.2 Khaatumo 3.2.1 Qaab Dhismeedka 3.2.2 Dabaylaha 3.2.3 Great Dark Spot The 3.2.4 isbedel Seasonal 3.3 magnetic 4 siddo waa Farraare 5 bilaha cusubu dhashaan Farraare 5.1 bilaha cusubu dhashaan Gudaha 5.2 hawaaqii 5.3 bilaha cusubu dhashaan dibadda ah 6 Discovery iyo sahaminta 6.1 Ka hor inta Voyager 6.2 Voyager 2 Ka dib markii 6.3 Voyager 6.4 Future 7 Seeds 8 Sidoo kale eeg 9 links External Neptune Bilowgii [Wax ka bedel | edit isha ]
Ayaa Neptune iyo kooxda kale ee gaaska malaha sameeyay hab ka duwan nidaamka iyo barxadda hoose qoraxda iyo waxaa jira aragtiyaha kala duwan oo ku saabsan asalka . Sida oo dhan meerayaasha kale ee la sameeyey harta Neptune ka soo daruur gaaska iyo boodhka meel bannaan in umushay qorraxda ka . Ka dibna waxaa jira laba aragtiyood ugu muhiimsan ee ku saabsan sida kooxda gaas sameeyay . Mid ka mid ah waa in uu qayb ka mid ah baraf iyo siigada ka bartay iyo biireen si ay meerayaasha dibadda ah diirkja adag , taas oo markaas soo jiidatay gaasas iyada oo cuf . Kan labaadna waa in cad ee quruurux meel bannaan oo ku hareeraysnaa qorraxda dhalinyarada iftiimisay hoos galay kubadaha yar oo boodhka gaaska iyo kaas oo kadibna waa la wada jabi galay meerayaasha . In ka badan malaayiin sano ee Qurub adag ka bartay kasta oo kale oo markaa aad loo dhiso ilaa uu accumulations badan oo dhagax iyo bir ah , lagu magacaabo planetesimals . Waxay si tartiib ah u noqday weyn oo ku filan in ay cuf gaar ah soo jiidan lahaa arrinta more . Mararka qaarkood waxay ka bartay iyo wada biireen . Sababta uu Neptune ka yar tahay kooxda gaas oo barxadda hoose waxaa laga yaabaa in ay jirto wax ka yar ee ka jira qaybaha sare ee nidaamka cusub ee - sameeyay qoraxda . [ 12 ] Orbit [Wax ka bedel | edit isha ]
Muddo dul qaado Farraare waa mid aad u dheer sababtoo ah meere ka fog qorraxda , oo ku saabsan soddon unugyo ah sumalka uguma waa . Waxay qaadataa planet 165 sano si ay u dhamaystiraan mid kacaanka agagaarka qorraxda . Neptune soo laabtay July 11 , 2011 [ 13 ] in ay dhibic ee ay idiinna ahayd markii la ogaado in 1846 , oo halkaas ku noqon doonaa sanadka soo socda 2176th [ 10 ] Cilmi baadhayaashu waxay leeyihiin arkay in Farraare idiinna duwan la filayo , iyo qiyaasayey in ay tahay sababta oo ah waddada waxaa saamayn ku jiido ee jiidashada shay ka baxsan idiinna ee Neptune . Marka ay ka heleen halkay ka haysteen in uu ahaa mid ka mid ah in carqaladeeyey idiinna ee Neptune , laakiin halkay ka leeyahay tiro aad u yar in ay saameynta badan Neptune . Waxaa la dibna wuxuu qiyaasayey in ay jirto meere weyn oo ka baxsan halkay ka ee idiinna in ay saamayn ku koorsada . Hadda la rumaysan , si kastaba ha ahaatee , in ay tahay alaab halkii more saamaynaya waddada Neptune sida Sedna . Properties Jirka [Wax ka bedel | edit isha ]
Neptune waa sida Jupiter , Saatun iyo Triton waxay Rafaa gaaska . Waxaa in yar ka yar yahay Triton laakiin culeyskiisu more , taasoo ugu isafgaradka meerayaasha gaaska ka dhigayaa . Waxaa la rumeysan yahay in Neptune leeyahay core ka kooban Silicon , birta iyo qaar kale oo culus . Qiyaastii xuduntii uu jiro intay galkeeda ka mid ah methane dareere ah , ammonia iyo biyaha . Qiyaasaha ayaa muujinaya in xudunta u leeyahay heerkul ah oo ku saabsan 7000 Celsius , waa gubniinka dusha qorraxda ee . Dhismaha Inner [Wax ka bedel | edit isha ]
Neptune qaab-dhismeedka gudaha Neptune u muuqataa in ay ku dhowaad gebi ahaanba ka kooban yihiin lakabka ah maqaar saar ka kooban hydrogen , helium iyo ammonia ; . Qoto dheer hoos ku daruuraha , oo ku saabsan 8000 KM u dusha meere ee la arki karo , waa go'iisii ​​, oo ka kooban baraf , ammonia iyo methane [ 14 ] Stock Tani waxaa joogto at ah oo ku saabsan siddeetan kelvin , cadaadiska here wuxuu ku saabsan yahay mid jawi . Waxa kale oo ay u eg yihiin Jaakada ee waa xarunta field magnetic Farraare . Inta lagu jiro galkeeda waa lakab khafiif ah oo ah hydrogen iyo helium , heerkulka ee gobolka tani waa qiyaastii 250 kelvin , iyo cadaadiska atmosfeerta waa sare at 200 000 atmospheres . [ 14 ] Core Meeraha ayaa waxay leedahay ballaciisu yahay ee ku saabsan 7,500 kiilomitir in ay hodan ku tahay birta iyo macdanta kale . Heerkulka core ku saabsan yahay sidii la mid ah sida ay Sun ee photosphere , in waxay ku saabsan tahay 6500-7000 Kelvin . Waxaa jira aragtiyaha in kulaylka ka imaan karaa Nabaad guurka nukliyarka xuduntii , Kuwo kalena waxay rumaysan yihiin macdanaha kala duwan in la falgala kasta oo kale , waxay la mid yihiin waxa ka dhacaya Saatun ah . Cadaadiska in asaasiga ah waa qiyaastii 6 million atmospheres . [ 14 ] Khaatumo [Wax ka bedel | edit isha ] Jawiga Neptunian waa in buluug midabka , laakiin haddii kale waxaa yar in la kala saaro ka soo jawi Triton ah . At dhulbaraha , waxaa suurtagal ah in ay daawadaan guutooyinkiisii ​​oo barbaro ah iyaga gudbaya iyo guutooyinkiisii ​​oo . Neptune waa ka badan firfircoon ka badan Triton . Waxyaabaha kale , helay Voyager 2 inta ay safarka ee la soo dhaafay kaalinta madow ee , kaas oo lahaa ballaciisu yahay ee ka weyn 10 000 kiilomitir . Later , indha-indhaynta leh waxlaxaha Space muraayada shaaca ka qaaday in this kaalinta gabiahaan , sidaas this ifafaale ku tirinnaa in Farraare jawi waa mid aad u firfircoon oo u furan in la beddelo . [ 15 ] Qaab dhismeedka [Wax ka bedel | edit isha ]
Voyager 2 sawiray oo hooskii daruur ugu horeeya on meere kale Jawiga badanaa ka kooban yahay qiyaastii siddeetan boqolkiiba hydrogen , siddeed iyo toban boqolkiiba helium iyo laba boqolkiiba methane . Sida Triton waa methane kaas oo ku siinaya planet midabka by dha light cas . Kuleylka in Neptune ka helo qorraxda kuma filna in uu ordo nidaamyada cimilada , si ay u la rumeysan yahay in kulaylka ka iman kartaa il kasta oo gudaha ah ee kulaylka , iyo tan markaas kicin lahaa waaweyn isbedel atmosfeerta . [ 16 ] Sababtoo ah Voyager 2 daruuraha in lagu tuuray oo hooskii on heer daruur hoose la sawiro , cilmi- gashay inay soo aragga cabiro kala duwan yihiin height ka dhex dhasha heerarka daruur sare iyo kuwa dhexe ee . [ 11 ] Farraare jawi waa mid ka mid ah qabow ee koonkan iyo heerkulka dhaladooda daruurtii noqon karaa yar intii toddobaatan kelvin ( -200 ° C) . Dabaylaha [Wax ka bedel | edit isha ] Farraare jawi leeyahay dabaylo nidaamka qoraxda ee ugu xoogga badan , oo leh xawaare ah ugu yaraan 2100 kilomitir saacaddii . [ 17 ] dabaysha on Neptune sidoo kale wuxuu leeyahay sifooyin kale marka loo eego meerayaasha kale . Seynisyahanno ku jirtay mid aad u adag si loo ogaado halka ay dabayshu waa inay afuufaan ku wareegsan dhibco mugdi ah . The xaaladaha dabayl korkeeda , inkastoo aan sidaas la yaab leh , laakiin dabaylaha afuufi dhinaca galbeed waa ka ku waani . On Jupiter , Saatun iyo Triton dharbaaxeen oo xagga bari , laakiin at Neptune guuro dabaylo xagga wareeg meere ee . Marka la daawashada dhow ee dunida korkeeda oo go'aan xawaaraha dabaysha dhici karta inay keentay maqnaanshaha kulaylka . In jawi diiran abuuray qas badan oo kaa caawin kara hakin dabayluhu . Xaqiiqadaas , cilmi- sharixi kartaa xawaaraha dabaysha Farraare . [ 18 ] Great Dark Spot [Wax ka bedel | edit isha ] On August 27 , 1989 yimid probe meel bannaan oo Voyager 2 ilaa Neptune , aaladaan oo kaliya in halkaas . Voyager 2 helay boos mugdiga on meere ee soo hijrootay dhulalka koonfurta lala boos yar yar mugdiga iyo daruur aan caadi ahayn oo cad , waxaa lagu magacaabaa mooto . Kaalinta u weyn yahay oo ku saabsan kala badh sida weyn oo sida Jupiter ee Red Spot . Waxay ka kooban tahay , sida on Jupiter , duufaan weyn . Waxaa la arkay in , dabaysha ayaa ka yahay 600 mitir ilbiriqsigii bartii mugdiga . Sannadkii 1994 , waxlaxaha ahaa dhanka Neptune , iyo waxa la ogaanin in kaalinta madow ee la arkay shan sano ka hor lahaa la waayay . Waxay sameeyeen hase yeeshee ka heli a kaalinta mugdiga cusub on meere ee u hijroodeen . Taas macnaheedu waa in jawi Neptune waxaa la soo shubto . [ 11 ]
Kor u magacaabay xilalka iyo tirada qaababka daruur lagu arkay on Farraare soo hijrootay dhulalka koonfurta by waxlaxaha inta u dhaxaysa 1996-2002 . Isbedelka Seasonal [Wax ka bedel | edit isha ] Haddii aad is barbar dhigi doonaa fiirooyinka ayaa la sameeyey intii u dhaxaysay 1996 iyo 2002 ayaa suurtagal ka heli yar kordhiso khiyaamo ah ee xilalka guud meere ee , qiyaastii boqolkiiba shan ilaa toban . Tani waxay ifafaale waxaa lagu sharaxi karaa koror ballaaran ee reflectivity ee qaar ka mid ah marsami khafiif ah , halkaas oo magacaabay xilalka laba jibaarmay . Tani waxay la xiriiri karaan isbedel xilliyeed . [ 15 ] Årtidsväxlingarna on Neptune qaadataa qiyaastii 165 times sidii waqti aad u badan sida kuwa dhulka , iyo isbedela ee ugu sareeya ee iftiinka qoraxda waa ka baxsan 900 times weyn marka loo eego dhulka . Model A fudud ku salaysan xilli matoorada stock muujinaysaa in kororka iyo hoos u dhac uu yahay mid la xidhiidha korodhka magacaabay xilalka . Neptune gaaro dhalaalayaa ugu badnaan shan iyo toban sano ka dib solstice xagaaga kasta , taas oo macnaheedu yahay in qiimaha next ugu badnaan waxay ka dhici doontaa mararka qaar agagaarka 2025 . [ 15 ] Field magnetic [Wax ka bedel | edit isha ] Neptune leedahay beer magnetic la mid ah Triton in ay magnetosphere . Sida for Triton field magnetic keli ahi xoog dhidibka wareeg ah ( 41 ° ) . Waxaa laga soo qaadayaa , sidaas darteed , ay hadda in jihada xad dhaaf ah kuwan beeraha magnetic waxaa sabab u ah isusocodka ee gudaha ee Planetary oo aan on Triton aanay sinaba u axial waaweyn , sida aan hore qiyaasayey . Oo siddooyinkooda ah Farraare [Wax ka bedel | edit isha ]
Main article : siddo waa Farraare
Oo siddooyinkooda ah Farraare , laga arki Voyager 2 Neptune ayaa , sida kooxda kale ee gaaska , oo siddooyinkoodana . Fiiro ah Ground ku salaysan muujiyeen kaliya inay siddooyinkiisa ku -goobeed , halka Voyager 2 muujiyey buuxa iyo xiran yihiin oo siddooyinkooda ah . Oo siddooyinku waxay ku yihiin aadka u madow iyo malaha ka kooban boodh dhagax . Mid ka mid ah lix siddo waa u muuqday leeyihiin qaab-dhismeedka qaloocin ku waani . Caddayn in siddooyinku waxay ku dhamaystirnayn yimid oo kaliya in bartamihii 1980 , markii occultations si dharci daro mararka qaarkood muujiyeen il jabin ah oo dheeraad ah ka hor ama ka dib star meeraha occluded ah . Images qabsaday 1989 by Voyager 2 caddaynaysaa this , in wixii ay heleen oo nidaam leh dhowr siddo si miyir beelid . Giraanta ka xigtaa waxay , Adam Ring , waxaa ku jira saddex Afayeen joogto ah , taas oo markii dambe wax ayaa loo magacaabay Liberte , Egalite , iyo Fraternité ( Liberty , Sinaanta iyo ubadkooda ku ) . Haddi ay jiraan Afayeen ku leeyihiin way adag tahay inaad sharaxdo sababta oo ah shuruucda makaaniyada quruxsan si deg deg ah ku milmi waa giraan ah dhqaalaha . Maleeyo in ay tahay jiido ee jiidashada of Galatea , dayaxa , kaas oo uu ku yaal xaq on siddooyinkiisa , taasoo ekerstrukturen . Siddo Dhowr helay by camera Voyager . Giraantii dhuuban Adam kaas oo been 63 000 mayl ee xarunta of Neptune , Leverrierringen doono iyo barka ka khafiifsan No ku yaal 53,000 km oo 42,000 km from xarunta meere ee . Faa'iido A fainter dibadda ka yimid Leverrierringen ayaa loo magacaabay Lassellringen . Waxaa ku yaalla qaybaha sare ee Aragoringen at 57 000 kiilomitir . [ 19 ] Fiiro ah Ground ku samaysay sanadkii 2002 iyo 2003 ayaa muujinaya in siddo waa Farraare ka badan deganayn intii hore ka maleeyay in ay yihiin . Gaar ahaan , taasi waxay khusaysaa Libertéringen in laga yaabaa in lagu lumay ee sida waqti gaaban ka billawdaan toban sano ah . The fiiro ah oo cusub oo iska weyddiinayeen, inta of the gunaanad hore ee siddooyinkiisa farsamooyinka dhismaha ah iyo wareegyo nolosha . Habka in loo dadajiyo Oo siddooyinku waxay hadda yihiin muuqata badan ka xoog badan kuwa iyaga la abuuro .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Docay&oldid=188590"